AKA AKPARALA MMADỤ ASAA NA-ALA ỤTỤ N’ỤZỌ EZIGHỊ EZI NA STEETI ANAMBARA – hoo!haa!!
N’Amansii di n’Ọka, na steeti Anambara, ka aka ndi nche obodo kpara mmadụ asaa n’ụzọ ochie si Enugwu gawa Ọnịcha, ebe ha kwuchiri ụzọ ma na-ala ndi ọkwọ ụgbọala gwongworo ego n’ụzọ akwụghị ọtọ.
Ọbụ site na igba mbọ ndi minisrị steeti ahụ na-ahụ maka azụmahịa na-agba, ịkwụsị ndi ji ụzọ aghụghọ ana ego na steeti ahụ ka ejiro jichie ndi a.
Mgbe ọ na-agwa ndi nta akụkọ okwu n’Ọka, n’ụbọchị Tuusdee gara aga ka Kọmoshiọna steeti ahụ na-ahụ maka azụmahịa, bụ Dọkinta Kristan Madụbuko gbarụrụ ihu katọọ ajọ akparamagwa ndi a na-ana ndi mmadụ ego n’ụzọ ezighị ezi. Ọ kachakwa njọ mgbe gọọmenti dọchaara aka na ntị megide nke a.
Mmadụ asaa ndi a gụnyere ụmụ nwoke isii nakwa otu nwanyị, ha na-anata ego maka ihe akọtara n’ubi nakwa ego ụlọ ọrụ mmepo na azụm-ahịa (produce fee and Commerce and Industry fee); site n’aka ndi ọkwọ ụgbọ-ala ukwu gwongworo.
Madụbuko sịrị na ndi a jiri ihe kpụchie ụzọ ma na-abagide ndi ọkwọ ụgbọ-ala gwongworo a, were ana ha ego n’anya íké.
Onye Kọmishiọna steeti ahụ na-ahụ maka adịm ọcha gburugbure ebe obibi ndi mmadụ, bụ Mazị Maikel Okonkwọ katọkwara ụdị ajọ akparama-agwa ahụ ma kwue na ọtụtụ ndi mmadụ ndi ọzọ jikwa aghụghọ anara ndi mmadụ ego maka adịm ọcha. Okonkwọ kwuru na mgbe na adịghị anya, na minisrị ya ga-amalite inwude ndi na-akpa ajọ agwa a. Ọ kpọkuru ndi mmadụ steeti ahụ ka ha sie imi n’ala nke ọma tupu na ha akwunye onye maọbụ ndi ọbụla ego ha n’aka.
O kwuru na gọọmenti steeti ahụ si n’aka onye isi ndi ọrụ steeti ahụ nye ụfọdụ ndi mmadụ akwụkwọ maka ilakọtara steeti ahụ ego kwesịrị ekwesi na ndi mmadụ ga-akwụ.
Ọ sịkwara na otu onye n’ime ndi a ana-ama imi kọwara onwe ya dịka onye nlekọta nke ndi steeti ahụ na-ahụ maka ndi na-akwọ ụgbọ-ala gwongworo n’ala anyị. Aha nwoke a bụ Madụka, onye Ụkpo dị na steeti Anambara. Madụka kwuru hoohaa, na ya nakwa ndi otu ya na-anata ndi mmadụ ego n’ụzọ ezighị ezi n’Amansii. O kwuru na ọ bụ kọmishiọna na-ahụ maka ọrụ ugbo nyere ikike maka ịnata ego ndi a.
Mgbe akpọtụrụ kọmishiọna steeti Anambara na-ahụ maka ọrụ ugbo bụ Mazị Afam Mbanefo, ọ kwụrụ ọtọ gọọ aka n’ụkwụ ya maka ebuboo a.
Previous Post: ALỤM DI NA NWUNYE
Next Post: NDI NA-ACHỌ BIAFRA CHERENỤ OGE CHINEKE! – Pastọ Ọnụoha